नेपालमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रमाउने कति ? - Science Dialog
ताज उपडेट / फिचर / मुख्य समाचार
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रमाउने कति ?
by Kapil Acharya · April 5, 2015
तपाइँ फेसबुक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? कार्यालयमा होस वा घरमा इन्टरनेटमा बस्ने वित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले खोल्ने वेभसाइट कुन हो ? यदि यसको उत्तर फेसबुक हो भने सोच्नुस त, तपाईँ जस्तै फेसबुकमा रमाउने मान्छे नेपालमा कति होलान् ?
फेसबुककै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिले ३८ लाख नेपालीले यसको एकाउण्ट बनाइसकेका छन् । विश्वभर नै लोकप्रीय फेसबुकमा नेपालका महिला भन्दा पुरूषको आबद्धता भने निकै बढी छ । तथ्याङ्क अनुसार फेसबुक प्रयोग गर्ने कुल सङ्ख्याको ६८ प्रतिशत हिस्सा पुरूषहरूको छ । बाँकी ३२ प्रतिशत महिला छन् । त्यसमा पनि १८ बर्षदेखि २४ बर्षका युवापुस्ता माझ यो सबैभन्दा बढी लोकप्रिय देखिन्छ ।
यो उमेर समुहको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । त्यस्तै २५ देखि ३४ बर्षका युवा जमातको हिस्सा भने २८ प्रतिशत छ । सबैभन्दा रमाइलो त १३ बर्ष उमेरदेखि नै नेपालमा फेसबुक प्रयोग गर्ने पाइएको छ । फेसबुकका निर्माता मार्क जुकरवर्गकै देश अमेरिकामा भने बालबालिकालाई फेसबुक प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध छ । कुल प्रयोगकर्ताको ८ दशमलव ५ प्रतिशत यहिं १३ देखि १७ बर्ष उमेर समुहको छ । बाँकी भने ३५ बर्षभन्दा बढी उमेर समुहका छन् ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ४ दशमलव ३० प्रतिशतले इन्टरनेट चलाउने गरेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणकरणको तथ्यांक छ ।
फेसबुक चलाउनेहरुमा १८ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका प्रयोगकर्ता सबैभन्दा धेरै छन् । यो उमेरका ५ लाख ४७ हजार ६ शय २५ जनाले फेसबुक चलाउँछन् । यो नेपालमा फेसबुक प्रयोग गर्नेको ४५ प्रतिशत हो । त्यस्तै फेसबुक प्रयोग गर्नेहरुमा २५ वर्षदेखि ३५ वर्ष २८ प्रतिशत छन् भने ३५ वर्षदेखि ४४ वर्ष उमेर समुहका ७ प्रतिशत छन् । फेसबुक चलाउनेहरुमा ४५ वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेरसम्मका २ प्रतिशत छन् भने ५५ वर्षन्दा माथिका २ प्रतिशत छन् ।
तथ्याङ्कले नेपालका १३ वर्षदेखि १७ वर्षउमेरका किशोर किशोरी पनि फेसबुक प्रयोगमा अगाडि रहेको देखाएको छ । यो उमेर समूहले फेसबुक प्रयोगकर्ताको १७ प्रतिशत ओगटेको छ ।
नेपालमा महिलाको तुलनामा पुरुष फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या झण्डै २ गुणा बढी छ । फेसबुक चलाउनेहरुमा पुरुष ६९ प्रतिशत तथा महिला ३१ प्रतिशत छन् । यो संख्या एशियाली मुलुक लेबनान र अफ्रिकी मुलुक केन्यासँग नजिक छ । लेबनानमा ५४ प्रतिशत फेसबुक प्रयोगकर्ता पुरुष छन् भने ४६ प्रतिशत महिला छन् । यस्तै केन्यामा ६४ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला छन् ।
गत अगस्टमा मात्र २३ हजार पाँच शय नेपालीले फेसबुकमा एकाउन्ट खोलेको तथ्याकंले देखाएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा १५ करोड ५१ लाखले फेसबुक चलाउँछन् । अमेरिका सबैभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको देश हो । अमेरिकापछि बढी फेसबुक चलाउने देशहरुमा इन्डोनेशिया, भारत र बेलायत छन् ।
दक्षिण यशियाली राष्ट्र बङ्गलादेश फेसबुक प्रयोगकर्ताको हिसाबले ५९ औँ स्थानमा छ भने श्रीलङ्का ७६ औँ स्थानमा छ । त्यस्तै चिन ९१ औँ स्थानमा छ । भुटान १५४ औं तथा माल्दिभ्स १३६ औँ स्थानमा छन् । त्यस्तै पाकिस्तान २५ औँ स्थानमा छ भने अफगानिस्तान १११ औँ स्थानमा छ ।
सबैभन्दा कम फेसबुक चलाउने राष्ट्र युरोपको भ्याटिकन सिटी हो जहाँ अहिलेसम्म जम्मा २० जनाले मात्र फेसबुक चलाएका छन् । क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वकै सबै भन्दा सानो यो देशको जनसंख्या नै जम्मा ८ सयको हाराहारी छ ।
माइक्रोसफ्टले अफिस प्याकेज ‘फ्रि’मा दिने
सामाजिक सञ्जालमा अदभुत बालकको चर्चा
Next story सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न उत्कृष्ट १० साइट…
Previous story गुगलले ल्याउने भयो टुक्राउन मिल्ने फोन